Dad u dhintay cariiri wado Kutala dalka Hindiya – Balcad.com Teyteyleey
Dad u dhintay cariiri wado Kutala dalka Hindiya
By Abdallah Hassan	 On Sep 30, 2017
ku dhowaada 22 qofood oo ay caruur ku jirto ayaa ku dhintay dalka hindaya waxana dhaawacyo kalduwn ay soo gareeyn 39 qofood ka kooban caruur iyo dad waaweyn. dadkan ayaa isbuurtay kadib markii ay wado cariir buundo ah katalbay cariir noqoto xilga subaxdii hore
shilkan ayaa ka dhacay wadyo yar ay dadka ka talban taa oo siku xirta deegnada Parel and Elphinstone qasraha dadka ayaa kor u dhaafay 60 qofood. dhimashada 13 rag iyo 8 haweeyn ah. dhaawacana waa 30 rag iyo 9 haween ah, gobjeege aya saxafada us heegay in dhibka uu hdacay markii roobyar oo meesha ka daye uu hakad geliye gadiidka dadweyn
goobta shika dhacay aya aheed meel paska laga raaco buudno yar isku xirta xafadaha Parel and Elphinstone. waxaana dhacday in rakabkii tareenka sugaya ay ka gambadeeyn roob iyagaao buux dhaafiye marink buundada. waxaa ay xalada faraha ka baxaday markii uu soo xirtay tariinkii labada kaa rakaab mesha ku dadiye.
rakabkii hore iyo kuwii dambe iyo dadkii buundada isticmalaye ayaa buxdhafiye xadiga buundada taa noqoto mid dadku ay is ciriiriyaan. dadka qaar oo shaqooyin iyo hoowlo kale kadaahaye ayaa damcay iney ka cararaan goobta nasiib daro masuurtoobin
masiibadan ayaa waxaa ay noqotay mid mid ka mid ah dhacdooyinka uxug ee dalka ka dhacay. waxana hada doood xoogan dhex martay maamulka magaalada, gobolka iyo wasiirada sida ay waxan u dhaceeyn.
The post Dad u dhintay cariiri wado Kutala dalka Hindiya appeared first on Ilwareed Online.
Gudoomiyaha baarlamaanka galmudug oo sharuudo adag duldhigay wadahadalada madaxweynaha galmudug
Dowladda Kenya oo ka digtay weerar Shabaab ku soo qaadaan Magaalada Mandheera.